रोबोटको सेवा चाहियो? आउनुस् नौलो रेष्टुरेन्टमा, यहाँ रोबोटले तपाईँको टेबुलमा ल्याउँछ खाना :: PahiloPost
May 20, 2019 | ६ जेठ २०७६
May 20, 2019 | ६ जेठ २०७६ Search
रोबोटको सेवा चाहियो? आउनुस् नौलो रेष्टुरेन्टमा, यहाँ रोबोटले तपाईँको टेबुलमा ल्याउँछ खाना
27th July 2018, 06:41 pm | ११ साउन २०७५
काठमाडौं : पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययन गरेका पाँच युवा र व्यवस्थापन पढेका दुर्इ युवा मिलेर पाइला टेक्नोलोजी कम्पनी खोले। कम्पनीले रोबोट बनाउन सुरु गर्यो।
उनीहरुले बनाएको रोबोट 'परी' नेपाल एसबीआर्इ बैंकले किन्यो। दरबारमार्गमा रहेको पहिलो स्मार्ट शाखामा रोबोट परीले कस्टुमर सर्भिसको काम गर्छिन्। बैकिङ क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने रोबोट तयार भएपछि उनीहरु होटल, रेष्टुरेन्टमा प्रयोग गर्न मिल्ने रोबोट बनाउन हौसिए। उनीहरु यो क्षेत्रमा हौसिनुको कारण थियो - सबैभन्दा बढी 'स्कोप'। अहिले होटल र रेष्टुरेन्टमा कामदारको लफडा सबैभन्दा बढी हुन्छ। अझ दक्ष कामदार पाउन कठिन नै छ।
त्यसपछि उनीहरुले रेष्टुरेन्टमा चाहिने रोबोट बनाए। मेकानिकल इन्जिनियरीङ पढेका रविन गिरी, सागर श्रेष्ठ, निरज बस्नेत, वसिम अक्रम खान र दीपकमल भुसालले रोबोट बनाए। र, रोबोटको बजार प्रवर्द्धनका लागि होटल र रेष्टुरेन्ट चहार्नु भन्दा आफ्नै रेष्टुरेन्ट खोल्ने 'आइडिया' फुराए।
रेष्टुरेन्ट खोल्दा आम्दानीको स्रोत पनि हुने र रोबोट बेच्ने माध्यम पनि बन्ने। रेष्टुरेन्टको योजना बनाएपछि उनीहरुले यसका लागि प्राइम लोकेसन आवश्यक हुने देखे। दरबारमार्गमा उनीहरुले भनेको जस्तै ठाउँ भेटे र इन्टेरियर डिजाइन थाले। उनीहरुले रेष्टुरेन्टको नाम राखे-नौलो।
केही महिनाको मेहनतले बिहीवार रंग ल्यायो। बिहीवार यो रेष्टुरेन्टको शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उद्घाट्न गरे। लामो प्रयासपछि रेष्टुरेन्ट खोल्न सकेकोमा उनीहरु खुशी मात्रै थिएनन् यसबाट आफ्नो सिर्जनाको सदुपयोग भएकोमा गर्व महसुस गर्दै थिए। रोबोट बनाउने मध्येका एक रविन भन्छन् - ‘हामीले उत्पादन गरेको रोबोटले रेष्टुरेन्टमा खाना सर्भ गर्छ। हामीले रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमै नयाँ प्रयोग गरेका छौं। यसले रेष्टुरेन्टको व्यापार बढ्छ। हामीले उत्पादन गरेको रोबोटको समेत बजारिकरणका लागि बाटो खोल्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं।’
यो रेष्टुरेन्टमा कागजी मेनु छैन। टेबुलमा डिजिटल प्रविधिमार्फत् खानाको अर्डर गर्न सकिन्छ। ‘टेबलमा मेनु देखिन्छ, क्लिक गरेपछि अर्डर हुन्छ,’ उनले भने, ‘खाना सबै रोबोटले सर्भ गर्छ।‘ उनीहरुले रोबोटको नाम राखेका छन् - जिन्जर र फेरी। जिन्जरले खाना सर्भ गर्छ भने फेरीले पानी, जुस लगायतका पेय पदार्थ।
प्रत्येक रोबोटमा १८ घण्टासम्म सेवा दिने क्षमता छ भने ब्याट्री पनि स्वचालित रुपमा रोबोट आफैँले चार्ज गर्छ। उनीहरुले यो रोबोट बनाउन एक करोड खर्चिएका छन्।
रेष्टुरेन्टमा ७० भन्दा बढी नेपाली रैथाने खाना र कन्टिनेन्टल परिकार छन्। 'हामीले रोबोट राखेर रेष्टुरेण्ट व्यवसायलाई मात्र केन्द्रित गरेका होइनौं। हाम्रो मुल उद्देश्य भनेको सर्वसाधारणलाई रोबोटमार्फत् सेवा दिनुका साथै नेपाली खानाको प्रवर्द्धन गर्नु पनि हो,' गिरिले भने।
नौलोको आन्तरिक संरचना अन्तरिक्ष यान भित्रको स्वरुपमा केन्द्रित छ। भित्र रहेको प्रविधि चलाउन ग्राहक अलमलमा नपरुन भन्ने उद्देश्यले समूहले भिडियो देखाउँदैछ। नौलोमा ४८ जना अटाउँछन्। बिहान नौ बजे देखि राति १० बजेसम्म खुल्ला हुने यो रेष्टुरेन्टमा १३ जना कर्मचारी किचनमा र तीन जना कर्मचारी वेटर छन्।
'ग्राहकलाई सुरुमा रोबोटसँग सेवा लिन अप्ठेरो नहोस् भनेर हामीले तीन जना वेटर राखेका हौँ,' गिरीले भने। उनका अनुसार निकट भविष्यमा नौलोमा माग अनुसारको रोबोट थप्ने र नेपालमै उत्पादित रोबोटको बजार संसारभर पुर्याउने उद्देश्य छ।
रोबोटको सेवा चाहियो? आउनुस् नौलो रेष्टुरेन्टमा, यहाँ रोबोटले तपाईँको टेबुलमा ल्याउँछ खाना को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)
Deepak [ 2018-07-27 20:25:09 ]
It sounds good... It seems as the new creation for our country. Hoping that Robot service system will get positive value and will be wildly distributed overall the high ranked hotels, banks, shops as well as multiple institudes... Want to wish -'all the best'.
घाँटीबाट छुटेको साढे ३ तोलाको सिक्री ५ दिनपछि यसरी सग्लै सहदेवको हात लाग्यो
लाखको बिटो माग्दै हजारको लुट : कार चढेर पाकिस्तानी दम्पतीको लुट्ने काइदा
सत्यमोहनको सय वर्ष बाँच्ने सुत्र: दिनको एक पेग अय्ला
सत्यमोहन जोशीलाई बर्थडे गिफ्ट : सरकारको कदरपत्र र फलफूल, नेवार समुदायको सगुन, २२ फोटोमा हेर्नुस्
नारायणहिटीमा गोली चल्दा चल्दै छिरेका एडिसी रानाले सार्वजनिक गर्दै हत्याकाण्डको वृत्तान्त
के नेपाल क्रिमिनल हव हो? विवाद बलिउड फिल्म 'मस्ट वान्टेड'को
प्रकृया मिच्दै नेपालबाट डाक्टर र नर्स लैजाने माल्दिभ्सको तयारी, खुलायो भ्याकेन्सी
प्रदर्शनकारीको सिक्री लुटेको आरोपमा प्रहरी परे कारबाहीमा
काभ्रेको सुन पसलबाट एसिड ल्याएर 'विष्णुले श्रीमती जलाए'
धेरैका मुखमा परेका तर कसैका आँखामा नपरेका अवैधानिक च्याखुरा !
सामुदायिक विद्यालयकी हेडमिसको धुन : विद्यालय छोडेर रक्सीमा टुन, चोरिन् साथीको सुन
सेनाको कब्जाबाट मुक्त हुँदै भक्तपुरको रानीपोखरी, काठमाडौंको टुँडिखेललाई कसले बचाउने?
वाह ! भन्नेगरी कतारले साढे ३ वर्षपछि आयोजना हुने वर्ल्ड कपका लागि तयार पार्‍यो स्टेडियम
मदन भण्डारी मृत्युको २६ वर्ष : पत्नी राष्ट्रपति, षड्यन्त्र किटान गर्ने प्रम तर घटना रहस्यमै